नरैनापुरमा वडापालिकाहरुको प्राथमिकता, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच’ – Satyapati
स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ‘दुर्गम’को परिचय बदल्न निकै प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । वडागत भौगोलिक बनावट, संस्कृति, भाषाशैली, समुदाय लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार केही फरक योजनाहरु छन् ।
सुगम जिल्लाको दुर्गममा रहेको नरैनापुर गाउँपालिका । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा अहिले पनि पछाडी नै परेको छ । संघीय संरचनासँगै कुनै बेला सुगम जिल्लाको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाले आफ्नो परिचयलाई बदल्न सुगमको ‘कर्णाली’ भन्ने परिचय मेट्दै अघि बढिरहेको छ, नरैनापुर । यो पालिकाको सामथ्र्य अब ‘दुर्गम’को परिचय र आकारमा होइन, सुगमतातर्फको उपलब्धिमा नाप्ने बेला आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सरकारीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा शुरू भएका नयाँ बहसहरु नरैनापुरका लागि भने सफल अनुभवहरु सुखद नतिजाका रुपमा सिद्ध हुन सक्नेछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ‘दुर्गम’को परिचय बदल्न निकै प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । वडागत भौगोलिक बनावट, संस्कृति, भाषाशैली, समुदाय लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार केही फरक योजनाहरु छन् । तर, सबैका प्राथमिकताले एकापसमा मेल खाइरहेको छन् । यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष मोल्हे बहेना शेष, वडा नं. २ का अध्यक्ष मसूद अहमद शाह, वडा नं. १ का अध्यक्ष राजकुमार मौर्य, वडा नं. ४ का अध्यक्ष दिनेशप्रसाद शर्मा, वडा नं. ५ का अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य र वडा नं. ६ का अध्यक्ष बिरेन्द्रपाल सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
मोल्हे बहेना शेष
वडाध्यक्ष – वडा नं. १, कटकुइँया
मोल्हे बहेना शेष, वडाध्यक्ष – वडा नं. १, कटकुइँया
सर्वप्रथम वडाका सबै वडाबासीहरुलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, विकास निर्माणको काममा यहाँहरुको जुन सहभागिता छ, जुन सहयोग छ, त्यो अविष्मरणीय छ । त्यो सहयोग सहभागिता जसले जुटाउनु भयो, योजनाहरु सञ्चालन गर्दा उहाँहरुप्रति धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । र अहिले सञ्चालन भइरहेका योजनाहरु र आफ्नो गाउँघर, छरछिमेक, शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने कुरामा सबै वडावासीहरुको सकारात्मक सहयोग अहिलेसम्म रहेको छ । त्यो सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा फेरी पनि राख्न चाहन्छु । र सबै वडाबासीहरुलाई यहाँहरुले पु¥याउनु भएको सहयोगप्रति कृतज्ञ छु ।
सबैभन्दा पहिला त स्रोत नै हो । स्रोतका ठिक हिसाबले परिचालन गर्न सकियो, स्रोत उपलब्ध हुन सक्यो भने स्रोतको उपलब्धताको आधारबाट विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन हुने हुन् । स्रोतको उपलब्धताको अवस्था हेरेर हामीले त्यसलाई थप स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था भयो भने यस वडाको विकास निर्माणको काम चाहि द्रुत गतिमा अगाडी बढ्छ । यद्यपी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडाको विकासले गति लिएको छ । कोरोना महामारीले विकासमा केही प्रभाव पारे पनि हाम्रो प्राथमिकताअनुसार वडाको विकास भइरहेको छ ।
हालसम्म वडा नं. १ मा रहेका पाँच वटा बस्तीभित्र २ किलोमिटर पक्की सडक (पीसीसी) निर्माण भइसकेको छ । त्यस्तै वडामा रहेको कटकुइँया स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गरिएको छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा ल्याइएको छ । वडाबासीहरुलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा ल्याउनका लागि धारा जडान गरिएको छ । मठमन्दीरहरु निर्माण तथा पुनःनिर्माण गरिएको छ । दुई वटा प्राथमिक विद्यालय र मदरसाहरु रहेको वडामा शैक्षिक सुधारका कार्यहरु पनि भइरहेका छन् । जस अन्तरगत नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय मतनियाँ र बनियाँगाउँ मदरसामा नयाँ भवनसमेत निर्माण भएका छन् ।
हाम्रा वडाभित्रका सडकहरु स्तरोन्नती गर्नुपर्नेछ । बिजुली बत्ती नपुगेका गाउँहरुलाई उज्यालो बनाउनु पर्नेछ । अहिले हाम्रो प्राथमिकता ति ठाउँहरुमा पनि छ र ति कामहरु हामीले गर्नेछौँ । शैक्षिक सुधार भएमा विकासका अरु पाटाहरु खुल्छन्, भन्ने सोंचका साथ शैक्षिक विकासले प्राथमिकता पाइरहेको छ । त्यस्तै कृषि मुख्य पेशा रहेको वडा नं. १ मा कृषकका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक कामहरु भएका छन् । शैक्षिक सुधार र स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकीकरण गर्दै वडाभित्रका समग्र कामहरु समानुपातिक ढंगबाट अघि बढिरहेका छन् ।
मसूद अहमद शाह
वडाध्यक्ष – वडा नं. २, लक्ष्मणपुर
मसूद अहमद शाह, वडाध्यक्ष – वडा नं. २, लक्ष्मणपुर
विकास निर्माणको काममा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय तथा मदरसा भवनहरु निर्माण तथा मर्मत, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरोन्नती, बाटोघाटो, पुल निर्माण यिनै हाम्रा प्राथमिकताका कामहरु हुन् । त्यो सँगसँगै भौतिक निर्माण देखिका अन्य कामहरुमा मानवीय विकासका क्षेत्रमा गर्ने कामहरु, आय आर्जनको क्षेत्रमा गर्ने कामहरु, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्ने कामहरु यी सबै कामहरुलाई हामीले सकेसम्म समानुपातिक ढंगबाट लिइरहेका छौं ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुरको स्तरोन्नती भएको छ । तीन शैय्याबाट १५ शैय्या बनाएका छौं । एमबिबिएस डाक्टरको उपस्थितिले जटिल प्रकारका विरामीबाहेक अन्य विरामीहरुले यहीबाट स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् । आँखा अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । जसले आँखाका विरामीहरुले सामान्य र मध्यमखाले सेवाहरु यही पाइरहेका छन् । वडा नं. २ मा रहेका ६ वटा मदरसामध्ये रोशनपुर र मियाँपुरमा मदरसा भवन तथा अन्य संरचनाहरु निर्माण गरिएको छ ।
गंगापुर गाउँमा ३० लाखको लागतमा मस्जिद निर्माण भएको छ भने लक्ष्मणपुरमै रहेको बाबाको मजारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको छ । जब्दहवा बाबा कुटीमा २० लाखका संरचना बनाइएका छन् । हुलाकी सडकदेखि वडा नं. २ को बेउचहवासम्म जाने सडह निर्माण भएको छ भने लक्ष्मणपुर गाउँमा १८ लाख रुपैयाँको लागतमा ५०० मीटर क्षेत्रमा इँट्टा विच्छ्याइएको छ । त्यस्तै हुलाकीसँगबाट रोशनपुर जोड्ने सडकको डीपीआर निर्माण भएर काम सुरु भएको छ । जसको लागत करिब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
वडा नं. २ मा हालसम्म तीन किलोमिटर सडक पीसीसी भइसकेको छ भने अन्य कच्ची सडकहरुको स्तरोन्नती भएको छ । लक्ष्मणपुरमै २५ लाख रुपैयाँको लागतमा हाट बजार सञ्चालनमा आएको छ भने ९ लाखको लागतमा नमूना तरकारी खेती सञ्चालन गरिएको छ । नरैनापुरमा यसै बर्ष विजुली आइपुगेको छ । तर, धेरै गाउँमा विद्युतिकरणको काम बाँकी नै छ । ती कामहरुलाई पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक स्रोत कम हुँदाहुँदै पनि हामीले सोचेभन्दा बढी विकासका कामहरु गरेका छौं ।
अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको शैक्षिक सुधार नै हो । शैक्षिक चेतनाले व्यक्तिलाई सकारात्मक चेत दिन्छ, जसले समाजलाई सकारात्मतातर्फ लैजान्छ, त्यसकारण पनि शैक्षिक सुधार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो, हाम्रा वडाबासी अहिले पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा हुनुहुँदैन । यो बीचमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् तर, अझै पनि थप सुधारका कामहरु गर्न बाँकी नै छ, यसतर्फ पनि हामी सचेत छौं । तेस्रो, हामीले कृषिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । अबको बाँकी कार्यकालमा अन्य भौतिक पूर्वाधारका अधुरा कामहरु पनि पुरा गर्नुपर्नेछ ।
वडाध्यक्ष – वडा नं. ३, कालाफाँटा
राजकुमार मौर्य, वडाध्यक्ष – वडा नं. ३, कालाफाँटा
यो साढे तीन बर्षको अवधिमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र स्थानीय आवश्यकताअनुसार सूची तयार पारेर हामीले काम गरिरहेका छौं । हाम्रो कामबाट वडाका बासिन्दा खुसी छन् । वडामा खानेपानी, सडक, बिजुली बत्ती लगायतका समस्या अहिले पनि छ । ती समस्या समाधानमा निरन्तर खटिएर लागिपरेको छु । वडाध्यक्ष भएपछि थप जिम्मेवारी बढेको छ । वठा नं. ३ मा पर्ने १२ वटा गाउँहरु मध्ये अझै पनि २० प्रतिशत वडाबासीको धारामा छैन, जसका कारण उनीहरु शुद्ध खानेपानी पाउनबाट बञ्चित छन् ।
खानेपानी ट्यांकी बनिरहेको छ, बोरिङ्गको काम पनि साथसाथै भइरहेको छ । १५ शैय्याको अस्पताल माग गरिरहेका छौं । अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयहरुले दुई बिगाह जग्गा दान गरेर दिनुभएको छ । जसको प्राविधिक मूल्याङ्कन भइसकेको छ । तर, अस्पताल निर्माण गर्न हामीसँग बजेट छैन, प्रदेश र संघले बजेट दिँदैन । भएको कालाफाँटा स्वास्थ्य चौकीको आवास भवन पनि जीर्ण छ । हामीसँग मर्मतका लागि बजेट छैन । जिल्ला समन्वय समितिसँग रकम माग गरेका छौं । अन्य वडाको तुलनामा यहाँ निकै कम विकास भएको छ ।
चार वटा प्राथमिक विद्यालय रहेको यस वडाको शैक्षिक अवस्थामा विगतको तुलनामा केही सुधार भएको छ । वडाका सबै नागरिकलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ, अझै पनि कतिपय बालबालिकाहरु शिक्षाको मुलधारमा आउन सकिरहेका छैनन् । हामीले यसका लागि अथक मेहनत गरिरहेका छौं । वडाबासीहरुको शैक्षिक चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न खाले सकारात्मक प्रयासहरु भइरहेका छन् । शैक्षिक सुधारका लागि वडापालिकासँग पर्याप्त लगानी नहुँदा सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन ।
अहिलेसम्म १० प्रतिशत सडकमात्रै पीसीसी गर्न सफल भएका छौं । अझै पनि धेरै वडाबासीहरुलाई हुलाकी सडकसम्म जानका लागि कच्ची सडकका कारण बर्षात्मा हिलाम्मे हुँदा समस्या हुँदै आएको छ । घरघरमा स्वच्छ पानी, घरघरमा विजुली पु¥याउनु पर्नेछ । गाउँहरुमा विजुली बत्ती पुगेको छैन । सबै गाउँलाई उज्यालो बनाउनुपर्नेछ । वडाका सबै बस्तीहरुमा पक्की बाटो निर्माण गरी मुल बाटो (हुलाकी सडक) सडकसम्म सरल पहुँच बनाउनुपर्नेछ । अधुरा आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
वडाभित्र रहेको ‘बर्फानी बाबा’ पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रचारप्रसारका लागि कुनै योजना छैन । यसको विकास र प्रचारप्रसार वडापालिका एक्लैले सम्भव नभएकाले गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश र संघीय सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका आवश्यक रकम विनियोजन गरेका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि चासो देखाउनुपर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार भएमा यहाँ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यहाँ चुरेमा भइरहेको वन विनास अर्को चुनौतिका रुपमा देखिएको छ, यसलाई रोक्न हामीले हरसम्भव प्रयास र प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
वडाध्यक्ष – वडा नं. ४, नरैनापुर
दिनेशप्रसाद शर्मा, वडाध्यक्ष – वडा नं. ४, नरैनापुर
हाम्रो मुख्य काम भनेको जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु नै हो । निर्वाचित भएयता ७० मैले गरेका धेरै वाचा पूरा गरेको छु । अब बाँकी अवधिमा मैले गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने चुनौति छ र गर्नेछु । हरेक वर्ष वडाबासीको राय अनुसार काम गरेको छु । वडामा आएको बजेटले स्थानीयको माग कति पूरा गरेका छौँ भनेर मापन गर्ने हो । त्यसरी हेर्ने हो भने मेरो वडामा पूर्वाधार विकासको काम धेरै भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्न सक्यौँ भने धेरै कुरामा प्रगति हुन्छ ।
आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न सक्यो कसैले रोक्न सक्दैन । हामी यो अवधिसम्म आइपुग्दा यही भावना र सोचले अघि बढेका कारण धेरै सफल भएका छौं । विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । गाउँसभाले बजेट बनाउनुअघि वडाका टोलटोलबाट जनसहभागितामा प्राथमिकता छुट्ट्याएर योजना माग गर्ने गरिएको छ । कानून अनुसार मिल्ने साना योजना उपभोक्ता समितिबाटै निर्माण गरेर स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा बनेको अनुगमन समितिले काम ठीक भए÷नभएको अनुगमन समेत गर्ने गरेका छौं ।
अहिलेसम्म वडाभित्रको १० किलोमिटर सडकलाई पीसीसी गरेर पक्की बनाएका छौं । वडाभिका सबै टोलमा धारा र सरसफाईका लागि आवश्यक जनचेतनामूलक कामहरु भएका छन् । महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न सकेका छौं । तीन वटा प्राथमिक विद्यालय रहेको वडा नं. ४ मा सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन अहिले पनि विभिन्न सचेनतामूलक कामहरु भइरहेका छन् । गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि धेरै सकारात्मक कामहरु भएका छन् । यसबाट स्थानीयलाई आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने चेत खुलेको छ ।
कृषकका लागि तालिक तथा अन्य आवश्यकीय कामहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर कृषि पेशालाई सबल बनाउन लागिपरेका छौं । गरिबलाई कम्मल वितरणका कामहरु भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको तुलनामा भन्दा उल्लेख्य सुधार भएको छ । नरैनापुर स्वास्थ्य चौकीबाट दिइने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाएका छौं । सुत्केरी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन लाभग्राहीलाई थप सहज र सरल बनाएका छौं । गरिब, दलित, लोपोन्मुख, आदीवासी लगायतलाई लक्षित गरेर हरेक बर्ष ठूलो रकम लक्षित वर्गको उत्थानमा खर्च भइरहेको छ । यसबाट उनीहरुको जीवनस्तरमा पहिलेको तुलनामा निकै धेरै सुधार आएको छ ।
वडाध्यक्ष – वडा नं. ५, मटेहिया
कृष्णचन्द्र मौर्य, वडाध्यक्ष – वडा नं. ५, मटेहिया
हामी निर्वाचित भएर आई सकेपछि कानुन, विधिविधानमा अलमल हुनुप¥यो । तथापी त्यसलाई पनि चिर्दै वडापालिकालाई प्रभावकारी रुपमा विकासका योजना र सुशासनका काममा गति दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लाग्दै गर्दा विकासका योजनाहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । कतिपय योजनाहरु सम्पन्न गर्न बाँकी छन् ती कामहरु पनि पूरा हुन्छन् । पहिलो एक वर्ष सिकाईमै बित्यो । अहिले संविधानले दिएका जुन अधिकार र कार्यक्षेत्र, स्थानीय तहमा आएका छन्, त्यसले गर्दा पनि अब सबैको समझदारी सहमतिमा अघि बढ्दा सेवाग्राहीलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा सेवा दिन सकिरहेका छौं ।
अझ भन्ने हो भने हामीले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई सकेसम्म पुरा गरेका छौं भन्ने लाग्छ । बाँकी रहेका प्रतिवद्धताहरुलाई पनि पुरा गर्ने प्रयत्नमा लागि रहेका छौ । जनताको चाहना आफु वडा कार्यलयमा जाँदा साथ काम हुनुपर्छ भन्ने छ । हामी पनि त्यही चाहि रहेका छौ । जनताले छिटो छरितो सेवा सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने हो । हाम्रो यो मान्यता पनि हो । र आएका सेवाग्राहीलाई हुने कामलाई छिट्टै गरिदिने र नमिलेका कामलाई यस कारणले तपाईको काम हुन सकेन यो मिलाएर आउनुहोस् भन्ने गरेका छौं । हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनतालाई यसको प्रत्याभूति दिलाउँदै सेवाग्राहीका भावना र उहाँहरुका भनाईलाई कदर गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।
वडाध्यक्ष – वडा नं. ६, गंगापुर
बिरेन्द्रपाल सिंह, वडाध्यक्ष – वडा नं. ६, गंगापुर
निर्वाचनका बेला मैले जनतासँग खास प्रतिबद्धता त गरेको थिइनँ । तर, निर्वाचन जितेपछि म जतिबेला पनि वडाबासीकै साथमा रहन्छु भनेर बाचा गरेको थिए । उहाँका सुखदुखमा साथ दिन्छु भनेको थिए, म अहिले पनि वडाबासीकै साथमा रहिरहेको छु । मैले उहाँहरुका सुखदुखमा साथ दिने गरेको छु । निर्वाचित भएयता स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि प्राप्त ग¥यो र त्यसको एउटा पात्र म पनि हुँ । निर्वाचनपछि कामको चाप पनि निक्कै धेरै छ । जनताका दैनिकीहरुसँग हामी भिडिरहेका छौं । उहाँहरुको सेवामा हामी तल्लिन भइरहेका छौं ।
व्यवस्था परिवर्तनपछि शुन्यबाट हामीले हाम्रा कामहरु गर्नुपरेको अवस्थामा वडाबासीले सोचेजति काम नभएको हुनसक्छ । हामीलाई पनि सुरुका दिनमा निकै सकस थियो । किनकी कानुनहरु बनेका थिएनन्, कानुन बनाउँदै काम गर्दै जाँदा केही ढिलासुस्ती र सोचेअनुसार विकास भएको छैन, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । अझ नरैनापुर गाउँपालिकामा अन्य वडाभन्दा विकासमा सबै हिसाबले वडा नं. ६ लाई पछाडी पारिएको छ । वैचारिक र राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले पनि केही समस्या छ । तर, मैले सकेजति काम गरेकै छु ।
म वडाबासीको आशा र भरोसामा खरोरुपमा उत्रिएको छु । तै पनि कहिँकतै राजनीतिक र वैचारिक बेमेल हुँदा समस्या हुँदोरहेछ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले वडा नं. ६ को जयकिसान माध्यमिक विद्यालयमा दश जोड दुई (१०ं२) सञ्चालन गर्न सफल भएका छौं । यो नरैनापुरकै पहिलो उच्च शिक्षा पढाई हुने विद्यालय भएको छ । शिक्षामा केही हदसम्म सुधार भए पनि अझै पनि धेरै चुनौतिहरु थपिँदै गएका छन् । सोनबर्षामा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति भएको छ । अहिले पनि यहाँको कृषिमा सुधार भएको छैन । कृषि परम्परागत रुपमै चलिरहेको छ ।
हामीले वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सडक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । बाटोको समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, युवा रोजगार लगायतका समस्या समाधानका लागि बजेट छैन । कोरोनापछि बेरोजगार बनेको युवाशक्तिलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौति छ । प्रदेश र संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी कामहरुमा हामी सफल भएमात्र ‘समृद्ध वडा, समृद्ध गाउँपालिका’ बन्नेछ । आफ्नो अठोटसँगै वडाका सम्पूर्ण रचनात्मक कार्यका लागि सबै वडाबासी र जनप्रतिनिधिहरुको श्रेय र सद्भाव रहेको छ । यसमा म सम्पूर्ण वडाबासीहरुमा कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।